Warraaqsi Uummata Oromoo daran jabaate – Onk. 4, 2017 akkanati oole |
#AMBOO BIYAA GOTAA.
GUDAR MOROMI cimma irraa olee.
Qeerroon Amboo dhamsaa Oromiyaa dhaf dabarsaa jiruu. Qabsoon amma Qabsoo FXG dha Oromiyaan Qeerroon hundi kana irrati qophahu qaba jedhu.
Sukkaarri Konkolaataa gurguddaa baajoo lama lamaa qabu 40 magaalaa Moyyaaleetti qabamee jira
Biyya Oromitaa keessaa sukkaara omishamu uummaanni ji’attu al takkaa argama. Sukkaara argamu kanaanis kan abbaa itti ta’ee jiraatu uummata utuu hintaane, humna wayyaanee alaa namoota hojjetaaniif hirama. Maallaqaan argee bitachuu hanga dhabutti gahaa dhufeera. Haa ta’u malee sukkaarri kub gartuu saamtotaan akka saamamaa ture gungumaamaa tureera. Sukkaarri biyya Oromiyaa keessaa nama dhuunfaa biliyeenara taasise. Uummata immoo nii iyyoomse . Tibba kana ji’a tokko oliif sukkaarru moyyaaleerra utuu darbaa jiruu daangaarratti qabame. Sukkaarri kun keniyaatti utuu dabarsaa jiranii foolisoonni Oromiyaa qabanii jiru jedhu. Hanga ammaa konkolaattonni kun haa qabaman malee abbaan qabeenyaa sun argaamaa kan hinjirredha icciitiin dhokataan bahaa jiru Abbaay Xaaye akka dabarsuuf turedha jedhamaas jira. Walii gala Tigiroonni saamaa turan qabamutti jiru. Via Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Oduu (Breaking News)
#Madda Oduu:- Qeerroo Bilisummaa Oromoo.
Humni gita bittaa wayyaanee. Waggaa bittaa isaa dabalachuuf hojii jalqabe cimsee kan itti fufe yoo ta’u, akkuma baha Oromiyaan uummata naannoo sumaalee fakkaatee uummata Oromoo lafarraa buqqaasaa ture Lixa Oromiyaanis hojii isaa itti fufuu qophii xumuruun isaa sabaa himaaleef gaabaasalee garaagaraan ifa ta’aa tureera. Humni waraanaa Wayyaanee noonnoolee Oromiyaa daangessan maraag meeshaa waraanaa hiruu irratti argama. Qabeenyaa uummata oromoo saamuun kanneen badhaadhaan qabeenyuma Oromoo irraa saamaniin meeshaa waraanaa bitanii naannoolee Oromiyaa daangessan gargaaruu irratti fiulleffannoo jabaan hojjetaa jira. Haaluma kanaan torbee darbe keessa meeshaa waraanaa, Matarayyasii, Qawwee, Boonbii fii kanneen waraanaaf oolan mara deggarsa uummata Gumuziif konkilaataa fsr tokko fe’ee utui deemuu kallattiin harkatti qabamuu odeessi Qeerroo ifa godha. Magaalaa Ukkee keessatti meeshaa qabame kana gara waajjira Foolisii magaalaa Naqamteetti sirbaa Foolisoonni oromiyaa aantummaa uummataa agrsiisuun gara Naqamteetti kan geessan yoo ta’u. Deebiin konkolaachisaa sanaas, “Garaa nu ergan, uummatni Gumuz akka ittiin of eeguuf ergaafii nuun jennaan geessan jirra ” jechuun akka Tigiroonni ykn wayyaaneen ergite dubbatan jedhu. Ammas daangaa eeggachuu fuulleffatanii akka jirantu himama. Via Beekan G Erena
HANNA SEERA QABEESSA QONDAALTOTA WAYYAANEE
Sukkaaraa Kuntaala 44,000 Qarshii 68,000,000 tti Korporeeshinii Sukkaaraa hatee gurgurate daangaa Mooyaalee irratti erga qabamee baatii lama guutuufi. Sababa kanaa konkolaattonni 144 hojii dhaabanii jiru. Akka konkolaachiftoonni jedhanitti sukkaara kana kan gurgure Korporeeshinii Sukkaaraa akka ta’e Konkolaachiftoonni himatannii jiru. Haa ta’u malee, gumurikni Mooyaalee ragaa sobaan waan deemaa jiruuf akka qabame ibse.
Kun hojii qondaaltota Wayyaaneeti. Qondaaltonni Wayyaaanee haaluma kanaan waggaa 27f ummata saamaa turan. Warshaan sukkaaraa waggaatti baatii afur suphamuuf hojii ni dhaaba. Ganna kana agadaa muranii oomishuunis waan ulfaatuuf oomishni hin jiraatu. Yeroo kanatti gatiin sukkaaraa Afriikaa keessatti haalaan dabala. Hattoonni Wayyaanee kana haalaan waan beekaniif qabeenya ummataa hatanii gurguratu.
Hattoonni kun yeroo heddu waraqaa eenyummaa tikaa (Security) fayyadamu. Fakkeenyaaf buna, Saliixii, Warqee, Meeshaalee Elektirooniksii, Albuudota kabajamoo (Gemstones) kanneen akka Emerald, Opal, Tourmaline, Sapphire fi kanneen adda addaa yeroo seeraan ala konkolaataa fi waraqaa eenyummaa security fayyadamuun beekamu. Hanna daangaa hinqabne raawwataa oolu.
Yeroo tokko tokko hattoonni kun ni qabamu. Yoo harkaa harkatti qabaman illee karaa adda addaa yakka irraa bilisa ta’u. Yeroo tokko tokko ammoo poolisoota daanga fi kellaa eegan irratti dhukaasa bananii miliqu. Konkolaataa taargaa hin qabne waan fayyadamaniif hin gaafataman. Yeroo juumlaan qabaman ammoo ni baqatu. Ani keessaa hin qabu jedhanii callisu. Humni isaan gaafatu hin jiru. Seerri isaan irratti hin hojjetu. Yeroo tokko tokko ammoo ofii walqabsiisu. Hattuun yeroo hattu osoo hin taane yeroo qooddattu wal lolti akkamu jedhamu sana.
Icciitiin sukkaara daangaa Mooyaalee irratti qabame kanaas kanuma. Qondaaltota waraanaa ykn tikaa wayyaaneetu dabarsaa jira. Hanni akkasii kun yeroo baay’ee poolisoota Oromiyaatii Kellaa Awwaash, Adaamaa, Moojoo, Adaabbaa fi Mooyaaleerratti ni qabama. Garuu olaantummaa tikoota wayyaanee jala dhaabbachuu hin danda’an. Hattoonni kun seera dahachuun hanna seera qabeessa raawwataa oolu. Via Lammii Beenyaa
Jeneeraloonni Tigiree wal fixxe
Jeneeraloonni Tigiree amma eegumsa Baankii Wugaagan hogganan sadii har’a waajjira isaanii keessatti wal irratti dhukaasuun namni sadii du’eera. Isaan keessaa tokko hoggantoota isaa 2 waajjira eegumsaa baankii Wugaagan Gamoo Dambal Ciitii Seentari Darbii 10ffaa irraatti argamu keessatti ture lameen isaanitti dhukaasee ofiis of ajjeesse. Via Dhábasá Wakjira Gemelal
Humni gita bittaa wayyaanee. Waggaa bittaa isaa dabalachuuf hojii jalqabe cimsee kan itti fufe yoo ta’u, akkuma baha Oromiyaan uummata naannoo sumaalee fakkaatee uummata Oromoo lafarraa buqqaasaa ture Lixa Oromiyaanis hojii isaa itti fufuu qophii xumuruun isaa sabaa himaaleef gaabaasalee garaagaraan ifa ta’aa tureera. Humni waraanaa Wayyaanee noonnoolee Oromiyaa daangessan maraag meeshaa waraanaa hiruu irratti argama. Qabeenyaa uummata oromoo saamuun kanneen badhaadhaan qabeenyuma Oromoo irraa saamaniin meeshaa waraanaa bitanii naannoolee Oromiyaa daangessan gargaaruu irratti fiulleffannoo jabaan hojjetaa jira. Haaluma kanaan torbee darbe keessa meeshaa waraanaa, Matarayyasii, Qawwee, Boonbii fii kanneen waraanaaf oolan mara deggarsa uummata Gumuziif konkilaataa fsr tokko fe’ee utui deemuu kallattiin harkatti qabamuu odeessi Qeerroo ifa godha. Magaalaa Ukkee keessatti meeshaa qabame kana gara waajjira Foolisii magaalaa Naqamteetti sirbaa Foolisoonni oromiyaa aantummaa uummataa agrsiisuun gara Naqamteetti kan geessan yoo ta’u. Deebiin konkolaachisaa sanaas, “Garaa nu ergan, uummatni Gumuz akka ittiin of eeguuf ergaafii nuun jennaan geessan jirra ” jechuun akka Tigiroonni ykn wayyaaneen ergite dubbatan jedhu. Ammas daangaa eeggachuu fuulleffatanii akka jirantu himama. via Adem Misoma
Dhaamsa Cimaa Qeeyroo fi Hawaasa Odaa Bultum Irraa.
“Dhaamsa Qeerroo M/Baddeessaa fi Aanaa Odaa Bultum irraa ummata keenya Wayyaaneefi ergamtuu wayyaanee saricha Abdi Qileen qabeenya isaaniirraa ari’ameef qabnu:
Akkuma beekkamu yaroo ammaa kana lamii teenya tan diina bineeyyii hadaamii ykn shonkaa wal saamaa jireenya isaanii gara dhadhaa fi damma nyaatuutti cahaniin shira hamaa ilma namaatiin hin malle kana ilmaan Oromoo irratti ta’e jedhanii Olloota keenya keessattuu firoota qabsoo bara dheeraa kan ta’e kanaan walitti nu buusanii bara aangoo isaanii dheereffachuuf abjuu bara dheeraa qaban kanaan ummata keenya Abbaa, Haadha, ilma, hintala, jaarsa, jaartii, Obboleessa fi Obboleettiin ija isaa duratti du’a bineensaan hin malle irratti raawwatamee fi Saamame kana
Nuti akka Qeerroo M/Baddeessaa fi Naannawa ishee warri qe’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafaman kun hundinuu godinoota itti hiraman kanarraa walitti deebistanii Koondoominiyemii noonnoo Adaamaa fi Finfinneetii fi Lafa Angawoota wayyaaneetiin saamame kanarra qubsiifamuu qaban jenna. Kanas wanti yaanneef yaroo ammaa warri hoogansa Godinaa fi Aanotaa tokko tokko ergama MNO tiin alatti Warri ergama wayyaanee harka lafa jalaatiin fudhatanii ummata Keenya garaan gubate kana addaan facaasanii hiyyummaatti hambisuuf wixxifatantu mullata kana nuti qeerroon Hagosii fi Abaayiin Alatti isa hin laallu waan ta’eef harka kennadhaa sabatti deebi’aa. iddoon ummanni keenya kun qubsiifamuu qabus maqaa seenaa qabu kan dhaloonni boruu irra baratuun magaalaa teenya guddo keessatti qubsiifamuu qaban kan maqaa naannoo dhaloota Isaaniitti jedhee baadiyyaatti isaan naquu barbaadu nuti wareegamuuf qophii ta’uu keenya isaan hubachiisuu feena .
Bilisummaan dhiiga ilmaan Oromootiin argamti!’
Via Najiib Marsimoonaa